Ahoana ny fomba fiasan'ny fifandraisana amin'ny bara fanamafisam-peo?
Rehefa misafidy bara fanamafisam-peo dia aza hadino ny misafidy iray miaraka amin'ireo fifandraisana mety amin'ny fahitalavitrao sy ireo singa hafa. Misy fomba roa ifanarahana amin'ny bara fanamafisam-peo amin'ny rafitrao. Ny fomba mahazatra indrindra dia ny fampiasana ny fahitalavitrao toy ny hub switching: ampifandraisinao ny mpilalao Blu-ray, tariby o ...
Miasa amin'ny mozika ve ny bara?
Miaraka amin'ny lazan'ny playback mozika tsy misy tariby, tsy mahagaga raha bara fanamafisam-peo maro no manolotra an'io fahaiza-manao io ankehitriny. Bluetooth® natsangana dia mamela anao handefa mozika mora avy amin'ny finday finday, takelaka, na solosainao afaka Bluetooth. Izy io dia miasa amin'ny mozika voatahiry amin'ny telefaoninao ...
Stereo sa Feo manodidina?
Tsara ny mamerina fa ny bara fanamafisam-peo rehetra dia ho tsara lavitra noho ny fahitalavitrao. Ny bara fanamafisam-peo dia toa endrika stereo izay mamerina mombamomba ny fahitalavitra havanana sy havia mitovy amin'ny fahitalavitrao. Saingy mihalehibe kokoa izy ireo noho ireo mpandahateny lehibe kokoa ampiasain'ny ampl ...
Bara fanamafisam-peo sa toha-peo?
Hatreto dia miresaka momba ny bara feo izay tena manana endrika bara lava sy manify isika. Fa misy karazany hafa koa: ny bara fanamafisam-peo amin'ny lampihazo, antsoina koa hoe base base. Ity famolavolana malalaka sy ambany ity dia mipetraka eo ambanin'ny fahitalavitrao ary manohana azy. Ny toby fanamafisam-peo dia manana ...
Ahoana ny amin'ny Subwoofer ho an'ny Sound Bar?
Raha mieritreritra ianao fa mety mila bara fanamafisam-peo miaraka amina subwoofer miaraka aminy, dia mety hametra kely ny safidinao io, saingy mety kely noho izay antenainao. Izany dia satria saika tsy misy tariby ireo subwoofer rehetra ireo. Izany hoe, mandray an-tariby tsy misy fangarony izy ireo ...
Aiza no kasainao hapetraka ny feonao?
Ny fahafantarana ny toerana hametrahanao ny bara fanaonao dia hanatsotra avy hatrany ny fanapahan-kevitrao ary hampihena ny safidinao. Misy safidy roa lehibe. Raha mihantona amin'ny rindrina ny fahitalavitrao dia azonao apetaka eo ambaniny ilay bara fanamafisam-peo eo am-pijerena tsara sy tsy milamina. Raha goin ianao ...
Fa maninona no mila bara fanamafisam-peo aho?
Ny bara feo dia nipoaka tamin'ny lazany tato ho ato, ary ny isan'ireo maodely dia nipoaka ihany koa. Noho izany dia namboarinay ity torolàlana momba ny fividianana entana ity mba hanampiana anao hahafantatra haingana hoe inona ny tsiro ny bara feo izay mety aminao indrindra. Ny bara fanamafisam-peo dia rafitra mpandahateny iray manontolo ...
Inona no atao hoe bara fanamafisam-peo?
Ny bara feo dia misy amin'ny fahitalavitra fisaka ... farafaharatsiny farafaharatsiny. Azo antoka fa ireo efijery mahia ireo dia namorona sary mazava kristaly. Saingy ireo mpandahateny bitika ao anatiny dia tsy afaka mamerina mifampiresaka mazava tsara, mainka fa ny fipoahana, ny fianjeran'ny fiara sy ny rehetra ...
Ireo mpandahateny Soundtro Wifi, Tv Soundbars, Wifi Soundbar ho an'ny Tv, Tendrombohitra Tv And Soundbar, Alexa Soundbar, Karaoke Soundbar,